Maamulka Ahlu suna Oo Beeniyey In Ay Kabaxeen Magaalada Dhuusamareeb Ee Xarunta Galgaduud – STAR FM SOMALIA
Xilli xiisad ay ka taagan tahay inta u dhaxeyso Deegaanada Godinlabe & Mareergur, ee duleedka Magaalada Dhuusamareeb, ayay Ahlu Sunna sheegtay inay difaacan doonto Dhuusamareeb, haddii la soo weeraro.
Axmed Macalin C/laahi, Gudoomiyaha Magaalada Dhuusamareeb, ayaa sheegay inaanay Ahlu Sunna cidina duulaan ku ahayn, laakiin haddii la soo hujuumo inaanay gacmaha ka laaban doonin kuwii soo weerara.
Gudoomiyaha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa beeniyay in Ciidanka Ahlu Sunna ay isaga baxeen dhammaan xeryaha ay ku lee yihiin Dhuusamareeb, isla-markaana ay weli jooggaan Magaalada, sida uu yiri.
Waxa uu soo hadalqaaday in abaabul ciidan ay wadaan dad uu sheegay inay ku biireen Maamulka Galmudug, kuwaa oo sida uu sheegay duulaan ku ah Ahlu Sunna, iyana ay daafacyo ka samaysten halka loo yaqaano Carro-tuurka, oo ku dhow Deegaanka Godinlabe.
Waxa uu ku celceliyay inaanay Ahlu Sunna cidina weerar ku ahayn, balse haddii Ahlu Sunna la weeraro inay difaacan doonto dhulka ay ka joogto Gobolada Dhexe.
Axmed Macalin C/laahi, ayaa qeexay haddii ay noqoto in la dagaalamo aynaan ku dul dagaalami doonin shacabka reer Dhuusamareeb, isla-markaana ay Magaalada ka difaaci doonaan dhinaca Carro-tuurka, sida uu yiri.
Maamulada Galmudug & Ahlu Sunna, ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada Gobolka Galgaduud, waxayna dhaq dhaqaaqyadan dareen baqdin leh ku keeneen shacabka.